Waa'ee Finfinneefi 'faayidaa addaa' Obbo Juneeydii Saaddoo maal jedhu? - BBC News Afaan Oromoo
Bara mootummaa ce'umsaa wayita heerri mootummaa tumame faayidaan addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdi jedhamee ifatti waanti lafa kaa'ame hin turre jedhu aanga'aan duraanii Mootummaa Naannoo Oromiyaa duraanii Obbo Juuneydii Saaddoo.
Finfinneen magaala guddoo Oromiyaati jedhamee heera mootummaa naannoo Oromiyaa jalatti haa tumamu malee mootummaa Oromiyaa jalatti bulaa hin jirtu.
Dhimmi kun gaaffilee gurguddoo qabsoo uummata Oromoo yeroo dheeraa yoo ta'u bifa lamaan dhiyaataa ture.
Tokko faayidaan addaa Oromiyaan Finfinneerraa qabdu haa kabajamu kan jedhu wayita ta'u kan biraa Finfinneen Oromiyaa jalatti buluu qabdi kan jedhudha.
Olaantummaa seeraa hanga abbummaa Finfinnee - Ibsa MM Abiy
Ofii faayidaan addaa kun maali? Daangaan bulchiinsaa Naannoo Oromiyaafi Finfinnee gidduu jira turee?
Yoo jiraatehoo maaliif bulchiinsi magaala Finfinnee daangaa naannichaa keessa galuun weerara lafaa gaggeessaa ture?
Dhimmoota bara bulchiinsa isaanii ture kaasuun pireezidantiin Naannoo Oromiyaa duraanii Obbo Juneydii Saadoo BBC waliin turtii taasisaniiru.
Oromiyaa fi Finfinnee bara chaartaraa
Bara mootummaa ce'umsaa ykn chaartaraa naannoleen bifa haaraan gurmaa'anii heerri mootummaa ammaa kunis qophaa'e.
Yeroo heerri mootummaa kun qophaa'u qaboo yaa'ii harkaan barreeffame fuula 103 argadheen ture jedhan kan jedhan Obbo Juneeydiin, waa'ee Finfinnee waan xiqqaan akka barreeffame dubbatu.
Yeroos magaalli Finfinnee chaartaraan naannoo 14 jedhamuun ture kan waamamtu.
Booda garuu chaartarri magaalaa Finfinnee akka qophaa'ee itti waamamni isaa Ministira Muummeef akka tahu taasifamuu dubbatu Obbo Juuneydiin.
Daangaan magaala Finfinnee yeroo sana turee fi amma jirus tokko miti jedhan.
Barreefama qaboo yaa'iis tahe labsiiwwan yeroos bahan irraatti mirgi abbaa biyyummaa saba duraan laficha irra jiraataa turee [indiginious right] wanti ibsame akka hin jirree fi kun akka idil-adunyaattuu fudhatama kan hin qabne tahuu himu.
Labsii mirga abbaa biyyummaa [indigionous Rights] Dhaabbata Mootummota Gamtoomanii keessatti sabni tokko osoo hin weeraramiin ykn bittaa gabrummaa jalatti hin kufiin dura lafa duraan irra jiraataa ture irratti itti fufinsaan mirga aadaa, eenyummaa fi hawwaasummaa isaa itti fufsiisuu fi daangaa isaa kabachiifachuu akka qabu ibsa jedhu.
Dabalataan fedhaa fi eeyyama saba kanaa osoo hin argatiin lafa isaa irraa fudhachuunis tahe humnaan buqqisuun akka mirga sabichaa dhiibuutti ilaalama jedha.
Faayidaa Oromiyaan Finfinnee irraa qabdu
Heerri mootummaa Federaalaa Itoophiyaa keewwata 49 Finfinneen magaala guddoo biyyittii tahuu fi naannoon Oromiyaa faayidaa addaa akka irraa argatu tumeera. Raawwiin isaa garuu seeraan kan murtaa'u taha jedha.
Dhimmootni seeran kan murtaa'an tahu jedhamanii kun qaboo yaa'ii yeroos ture keessatti wanni barreeffame hin jiru, ''OPDO keessaas namni beeku hin turre'' jedhu Obbo Juneeydiin.
Booda erga pirezidantii Naannoo Oromiyaa tahanii booda dhimma kana Obbo Mallas Zeenaawii akka gaafatan dubbatu.
''Obbo Mallas, Leencoon akkas jedhamee keessa nuuf haa galu jennan galchine malee waanan beeku hin qabu naan jedhe'' jedhan.
"Yeroos faayidaan addaa amma ka'aa jiru kun maal tahuu danda'a jennee ofii keenya itti yaadnee qopheessinee MM duraanii Obbo Mallasitti kennine" jedhan.
Wanti yeroos qophaa'es mana maree magaalaa Finfinnee keessaa dorgommii tokko malee taa'umsi 25 Oromiyaaf akka kennamuufii kan hafe irratti ammoo akkuma warra kaanii akka dorgomuun danda'amu.
Kantiibaan magaalichaa Oromoo tahuu akka qabu, Teessoo naannoo Oromiyaa tahuun akka itti fufuu fi Afaan Oromoos akka afaan hojiitti akka tajaajiluu qabu kan jedhu ta'uu himu.
Dhimmoota bulchiinsa daangaa, eegumsa naannoo fi kaan irrattis akka waliin hojjechuu qaban gaafachu himu..
Poolisiin magaala Finfinnee fi Naannoo Oromiyaa akkamiin magaala keessaa fi naannoo isaatti waliin akka hojjechuu qabanii fi mirgi abbaa biyyummaa kabajamee wal qixxuummaa saba kaani waliin sirna federaalizimiin waliin jiraachuu akka qaban irratti kan xiyyeeffate ture jedhu.
Qabxiilee gaafanne keessaa kantiibaa magaalaa Finfinnee ''maqumaafis tahu'' akka magaalicha bulchu taasisaniiru jedhan Obbo Juunediin.
Isaan kaan irratti deebii akka hin arganne dubbatu.
Maastar pilaanii jalqabaa fi teessoo MNO
Waajjira pirezidantii MNO Boolee naannoo Dambal jiru gadhiisnee akka baanuuf Ministirri Muummee Itti Aanaa duraanii Obbo Addisuu Leggesee xalayaa nutti barreessanii jedhu Obbo Juuneydiin.
Obbo Mallas waliin falmii guddaa goonee akka gadhisnee hin bane itti himne jedhu. Dabalataan waajjirichi gara mootummaa naannoo Oromiyaatti akka jijjiramu gaafanne jedhan.
Yeroo sana waajjirri pirezidantii gara Adaamaa deemuu baatus biirooleen tokko tokko Adaamaa galanii ture.
Waajjirri guddaan pirezidaantii MN Oromiyaa ammaa mootummaa Dargii keessa kan hojjetame.
"Yeroo sana ministira Qonnaa kan turan nama Dr. Garramuu Dabalee jedhamantu Jooniyaa deeggarsa midhaan nyaataafi beela Kaaba Itoophiyaatti uumameef alaa dhufe gurguruun ijaarsise" jedhan Obbo Juunediin.
Maaster pilaaniin marsaa jalqabaa bara Obbo Kumaa Dammaqsaa pirezidantii Naannoo Oromiyaa turan waggaa 19 dura bara 2000 akka qophaa'e jedhu.
"Yeroo sana dinagdee Oromiyaa hogganaa waanan tureef waamamee wal gahii isaa irratti hirmaadhera" jedhan.
"Obbo Alii Abdoo Itti Gaafatamaa magaalaa Finfinnee turan, Maaster pilaanichi Finfinnee bakka lamatti kan kutu tahee Shawaa Bahaa keessaa aanota akka Ada'aa, Liiban, Gimbichuu, Gaara Erer, Sandaafaa, Caancoo, Sulultaa, Hoolotaa, dabalatee hanga laga Awwaashitti kan haguugu ture."
Walgahii sana irratti mormeen dhiisee bahe kan jedhan Obbo Juuneydiin, dokimentii guyyaa sana dhiyaates fudhadheen bahe jedhu.
Yeruma sana ani hojiikoon gadhiisa ykn koree hojii raawwachiiftuu waamii murtoo dabarsi jedheen Obbo Kumaatti hime jedhu.
Kanumaan dhimmichi hafee ture booda bara 2015 keessa irra deebiin isuma fidan jedhan.
Obbo Juunediin Yeroo Pirezidanaatii Naannoo Oromiyaa tahuun bulchaa turan Naannoo Oromiyaa fi magaala Finfinnee gidduu daangaan bulchiinsaa ifsatti jira ture jedhu.
Kibbaan laga Daadhii, kaabaa bakka sakatta'insa gaara Inxooxoo, Lixaan gaara Buraayyuurraa lafa adda bahe jira jedhanii Ashawaa Meedaa fi Taaxeq Oromiyaa jalatti deebi'aniiru jedhan.
Tooftaa guddina magaalaa jedhuun lafa qonnaan bulaa keenyaatu weerarama jedhan Obbo Juunediin.
Yeroo bulchiinsa isaaniis manoota seeran ala daangaa keenya keessatti ijaaramaa turan diigsisaa turre jedhu.
''Gaaffiin Finfinnee akka dhukkuba sareeti''
Lafti kan jiru mootummoota naannoo harkadha kan jedhan Obbo Juuneydiin mootummaan federaalaa lafa qofaatti ofii isaa bulchu tokko iyyuu hin qabu jedhan.
Kanaaf lafti magaala Finfinnees naannoo Oromiyaa keessatti waan argamuuf itti waamamni isaas tahe bulchiinsi isaa federaalaaf tahuu hin qabu jedhu.
"Gaaffiin Finfinnee akka dhukkuba sareeti. Dhukkubni saree taa'ee taa'ee namatti ka'a" kan jedhan Obbo Juuneydiin gaaffichi ammas furmaata hanga argatutti itti fufa jedhan.
ABO-Tokkoome: 'Daangaa Oromiyaafi Finfinnee kan murteessuu qabu Oromiyaadha'
Ibsa MM Abiy Ahimad: Dhimmoota ijoo irratti deebii MM Abiy kennan
Finfinnee: Dhimma lafaa ilaalchisee tajaajilli yeroof dhaabbate
Qabxiilee gurguddoo bu'aa filannoo Itoophiyaa bara kanaa murteessuu danda'an
Dizaayinarii uffata aadaa Oromoo dorgommii idila-addunyaa mo'ate qopheessite
Loltuun saala jijjiiratte waraana biyyashee himachuuf jirti
Ameerikaan bineeldota imala xiyyaaraa irratti nama gargaaran hir'isuufi
Pireezidaantiin Yungaandaa 'dinnicha nyaachuun kg30 akka hir'isuu na gargaare' jedhan
Dhippinni arriin akka biqilu' taasisaa?
Leenjisaan Maanchister Yuunaayitid Soolshaayer hojii isaa dhabuu mala